Soo dejisan Imagen 3.1.2 – Vessoft
Soo dejisan Imagen
Imagen – ciyaaryahan ay u ciyaaraan files warbaahinta la taageero ah qaabab loo jecel yahay. Software ka kooban yahay go’an caadiga ah ee qalabka u ciyaaro, hakan, celi by jir iyo qabsato mugga. Imagen kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto qaabka, cabbirka, heerka riixo, xawaaraha ee suuqa kala iibsiga xog iyo macluumaad kale oo ku saabsan socda files. Software waxuu si aad u screenshots, beddel fps ah, nuqul ka, rename iyo tirtirto alaabta. Imagen kale oo ay taageertaa maamulka ciyaaryahan isticmaalaya hotkeys ah.
Taageerada qaabab warbaahinta caanka ah
Muujiya macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan file ah
Kartida in la sameeyo screenshots
Comments on Imagen:
Imagen Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... AdwCleaner 6.030